Malunga Nathi - Shanghai SOG neeMpompo Co., Ltd
Njengoko kuhle njengamanzi
Uphando & Innovation
Ye & CDLF
Shanghai SOG neeMpompo Co., Ltd. yasekwa ngo 2005. abazahluleleyo ukuvelisa iimpompo ezikumgangatho ophezulu kwaye azibandakanye ekunikezeleni "ezikumgangatho ophezulu, uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi-ukusebenza, amandla-ugcino, kunye nokusingqongileyo lula" pumps.It Yeyona amashishini ezintsha phambili e china e kwiinkalo stainless yokumpompa centrifugal kunye nempompo amdaka ngwenya.
imveliso SOG, abalimi yi ye & CDLF series nkqo insimbi multistage pump centrifugal, CHL & CHLF series tye insimbi multistage pump centrifugal, CQB & ZCQ series steel stainless pump magnetic, IH & CZ & ZA series pump steel stainless imichiza, QBY series pump uvalo, WQP series steel stainless pump kwelindle ngwenya, WQGS series heavy-umsebenzi pump ukusika amdaka, SGL & SGW series Mcetywa yokumpompa centrifugal kunye nenkqubo empompa system.which nokulawula ngokubanzi kusetyenziswa zokuhlala, zorhwebo noshishino zothutho amanzi. ulwelo Industrial unyango, ukhuselo lokusingqongileyo, unyango yamanzi kunye namanzi amdaka kunye nezinye iinkalo.
" SOG ukuvumela ukuhamba kwamanzi engummangaliso " Ukuze ukuphumeza iingcali impompo ezikumgangatho ophezulu kaThixo, SOG kukhokelela imigangatho yamazwe ngamazwe, ehlanganisa izinto zobugcisa phambili, ngaba iinguqu rhoqo zeteknoloji kunye ezintsha ukuphucula umgangatho lobuchwepheshe pump yakhe. " Umgangatho livela uxanduva, ukunyaniseka idala ixabiso, kwaye ukuhlonipha win iphumelele elizayo " lixabiso engundoqo SOG. Umxumi onikeza kunye iimpompo iindleko-esebenzayo kunye neenkonzo luxanduva iphambili kuthi.
Ingqibelelo lusisisekelo lweshishini, r espect kusisiseko ntsebenziswano. Siyayihlonipha izinto ngamnye kunye neemfuno, ukufumana izinto esivumelana ngazo xa besakha umahluko, baze bazuze iziphumo win-win phakathi abathengi, abasebenzi, kunye namahlakani kuphuhliso. ukuze kwakhiwe ezinzileyo ixabiso chain yequmrhu.
Ekhangele phambili kwikamva, SOG uya kuqhubeka ukuphuhlisa ishishini yesizwe. Xa umoya ukuphumeza umbono ' Yakha omhloniphayo lweshishini ". SOG uzibophelele ekuphuculeni kunye nokusetyenziswa ukuba imithombo yamanzi kunye nokusingqongileyo zabantu ...